खाली हात केकी, के रोज्लिन् अब ? | Jukson
भनिन्छ, हिरोइनको आयु लामो हुन्न। अझ विवाहपछि त नेपाल र भारतमा हिरोइनको करिअर लगभग सकिन्छ। तर, नेपालमा करिश्मा मानन्धर अपवाद हुन्। उनले विवाहपछि नै भएभरका फिल्म खेलिन्।
केकी अधिकारीले पनि धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउँदै हिरोइनका रूपमा लामो इनिङ खेलिन्। म्युजिक भिडियो हुँदै फिल्ममा आएका हिरोइन टिकेका उदाहरण थिएनन्, अझ केकीलाई त प्रचलित हिरोइनको मान्यताअनुसार उचाइले पनि धोका दिएको थियो।
‘केकी एकदुई फिल्म खेलेर गायब हुन्छिन्’– धेरैको अनुमान थियो। तर, केकीले धेरैको अनुमानलाई गलत साबित गरिन्। ‘स्वर’बाट डेब्यू गरेयता उनले आठ वर्ष उद्योगमा बिताइन्। यतिबेला भने उनको करिअरले बिट मार्ने संकेत गरेको छ।
केकीको हातमा अहिले एउटा मात्र फिल्म छ, ‘सरकारी जागिर’। उनले सुटिङ सकाइसकेकी छिन्। योबाहेक उनको हातमा अर्काे फिल्म छैन। अब केकीसँग फिल्मसँग जोडिने दुई विकल्प छन्। एउटा आफैँ फिल्म बनाउने र आफैँ खेल्ने। दोस्रो हिरोइन छाडेर चरित्र अभिनेत्री बन्ने। हेरौँ, केकीले के रोज्छिन् ?
मेलिनाले ल्याइन् ‘गाइदेउन गीत ए कान्छा’
प्रधानमन्त्री ओलीले सोधे- अझै सरकार देख्नुभएन ?
अस्ट्रियामा भएको आम निर्वाचनबाट कुर्ज विश्वकै कान्छो उमेरको नेता बन्ने
पूर्वकुमारीको प्रेम चल्यो आजदेखि